Celtic Oo Jawaab Kama Dambays Ah Arsenal Ka Saxiixay Axiixa Odsonne Edouard | Somalia News
Celtic Oo Jawaab Kama Dambays Ah Arsenal Ka Saxiixay Axiixa Odsonne Edouard
Tababaraha Kooxda Celtic ee Neil Lennon ayaa carabka ku adkeeyay inuu doonayo inuu Odsonne Edouard ku sii hayo Celtic ka dib markii weeraryahanka reer France uu seegay kulankii ay kooxdiisu 3/2 uga badiyeen kooxda Livingston kana tirsanaa horyaalka Premiership.
Edouard ayaa bartilmaameed u noqday kooxda Arsenal xagaagan iyaga oo doonaya in ay ku badalaan xiddiga Alexandre Lacazette oo lala xidhiidhinayo in uu isaga tagayo kooxda.
Laakiin tababaraha kooxda Celtic ayaa xaqiijiyay in uuna doonayn in uu iibiyo xiddiga 22 jirka ah inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
“Ma doonayo in aan iibiyo”ayuu u sheegay saxaafada kadib guushii kooxdiisu gaadhay.
“Wali nooma iman wax dalabyo ah waxana aan rajaynayaa in uu ahaado xiddig Celtic ah dhamaadka suuqa kala iibsiga.
Previous articleInter play against Pisa in a friendly match
Next articleShan su’aal oo jawaab u baahan kadib heshiiskii lagu gaaray Villa Somalia